Wacom dia manolotra ny katalaoginy vaovao any Espana miaraka amin'ny Cintiq Pro 24 ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Niantso ny fampahalalam-baovao i Wacom androany maraina mba ny fampisehoana ny katalaoginy vaovao any Espana izay manasongadina ny Wacom Intuos vaovao, ny Wacom Cintiq Pro 24 ary ilay Wacom Engine nandrasana hatry ny ela. Fifanasana tena manokana iray noho ny lazan'ny marika be izay tokony hamboarina amin'ireo takelaka sary tsara indrindra eny an-tsena.
Katalaogy vaovao tonga mivantana amin'ireo olona matihanina vaovao manakaiky ny nomerika rehefa taona maro lasa izay, saika tsy afaka nieritreritra izany. Ankoatry ny famelabelarana dia nisy ihany koa asehoy ny mpanakanto Maroto Bambinomonkey ary ny manam-pahaizana 3DBiotech Jaime Aisa. Nasehon'izy roa ireo ny fomba ahafahan'ireo fitaovana ireo manatsara ny vokatrao.
Avy amin'ny katalaogy vaovao dia manomboka amin'ny Wacom Intuos vaovao izahay, kinova vaovao iray amin'ireo vokatra fanta-daza indrindra na ny vao manomboka na ny matihanina. Amin'ity indray mitoraka ity dia miavaka amin'ny manana Bluetooth tsy voatery amin'ny maodely sasany ary misy amin'ny loko telo samy hafa.
Ny sanda iray hafa amin'ny Wacom Intuos vaovao dia ny azy penina niomerika misy haavo 4096 fahatsapana ny tsindry ary inona ny haitao Wacom EMR ary famolavolana ergonomika manokana hahatonga ny traikefa amin'ny sary araka izay tratra. Ireo Wacom Intuos vaovao dia ao anatin'ireto maodely telo ireto:
Wacom Intuos Kely miaraka amin'ny Bluetooth: 99,90 euro.
Wacom Intuos kely tsy misy Bluetooth: 79,90 euro.
Wacom Intuos Medium miaraka amin'ny Bluetooth: 199,90 euro.
Miroso amin'ny Wacom Cintiq Pro, kintan'ny hetsika sy fampisehoana isika, efa niresaka momba ny volana vitsivitsy lasa izay isika, ary efa misy izany amin'ny haben'ny 24 mirefy vaovao. Noho izany ny repertoire dia manana habe telo samihafa: 13 ″, 16 ″ ary 24 ″. Ny Wacom Cintiq Pro 24 dia misy amin'ny vidiny manomboka amin'ny 2.149,90 euro ka hatramin'ny 2.699,90 euro.
Miaraka amin'ny Wacom Cintiq Pro dia miresaka takelaka misy a 24, fampisehoana vahaolana 4K IPS, Loko 10 bit, fifandraisana amin'ny alàlan'ny port USB type-C, jack audio ary gajety mahaliana: ny ExpressKey Remote. Io dia ahafahantsika manamboatra bokotra telo hanomezana hetsika ho an'ny karazana fampiharana 3D rehetra.
Azontsika atao ny manampy ny maoderina informatika Wacom Cintiq Pro Engine izay manana ny fahaizana ovay ho lasa studio famoronana ny Cintiq Pro. Azontsika atao ny manasongadina azy noho ny sary NVIDIA Quadro P3200 ary noho izy mifanentana amin'ny zava-misy virtoaly.
Ny Wacom Cintiq Pro Engine dia amin'ny endriny roa: ny Cintiq Pro Engine i5 ho an'ny a vidin'ny 2.699,90 euros ary ny Cintiq Pro Engine Xeon amin'ny vidiny 3.549,90 euro. Ny fanampiny tonga lafatra amin'ny Cintiq Pro ary manana toy izany ao amin'ny studio miaraka amin'ny fitaovana roa izay hiaraka hitondra antsika amin'ny lalana hafa amin'ny famokarana zavakanto nomerika. Indrindra ho an'ireo matihanina, injeniera ary mpampiasa sarimiaina izay mila fampisehoana ambony amin'ny andavanandrom-piainany mba hahazoana bebe kokoa amin'ny asany.
Ny iray amin'ireo vokatra natolotra dia ny teknolojia Pro Pen 2 izay misongadina amin'ny fanomezana fahatsapana ny tsindry hatramin'ny ambaratonga 8192 ary latency izay saika tsy misy; Tena ilaina ny mandray penina toy ny Pro Pen 2. Afaka nanamarina tamin'ny toerany ny fomba nitondrana azy tamina hetsika iray ihany izahay, ary ny tena marina dia mety izany mikasika izany mba hahafahantsika misintona amin'ny efijery amin'ny ambaratonga tsindry samihafa .
Efa ilay mpanakanto Maroto Bambinomonkey, ilay iray nandritra ny adiny iray Nasehony taminay ireo fiasa isan-karazany izay voaporofon'ny Wacom Cintiq Pro fa mahavita an'io asa io, tahaka ny nanokafany ny fotoanany hanehoana ny fizotran'ny sary amam-panahy. Maroto dia mpanao sary niasa tamin'ny marika amerikanina samihafa nandritra ny 8 taona ary naneho talenta lehibe tamin'ny famoronana tarehin-tsarimihetsika, toy ny niarahany tamin'ny rocker alien izay ho hitanao amin'ny iray amin'ireo sary nozaraina ary koa ny manaraka amin'ny sary voalohany.
Fitaovana maromaro namboarina ho tsena mitombo ny fangatahana amin'ny famoronana toy ny sary 3D, injeniera 3D, famolavolana indostrialy, Augmented Reality sy Virtual Reality endrika ary ireo sekoly sy oniversite rehetra te hanana fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpianany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Wacom dia manolotra ny katalaoginy vaovao any Espana: Wacom Intuos vaovao, Cintiq Pro 24 sy maro hafa